Aadan Coobbe oo golaha shuurada Al-Shabaab ka tirsanaa oo Muqdisho la geeyey | Goojacade
Home War Aadan Coobbe oo golaha shuurada Al-Shabaab ka tirsanaa oo Muqdisho la geeyey
Aadan Coobbe oo golaha shuurada Al-Shabaab ka tirsanaa oo Muqdisho la geeyey
Sarkaalkii ugu sareeyay ururka Al-Shabab oo ka tirsan Golaha Sare ee Shuurada Alshabaab ayaa isu dhiibay dawladda Soomaaliya ee ku sugan Gobolka Gedo, iyadoo loo duuliyey magaalada Muqdisho.
Sarkaalkan oo lagu magacaabo Aadan Cabdi Maxamed (Aadan Coobbe) ayaa wadahadal kula jiray dowladda Soomaaliya, waxaana la sheegay inuu khilaaf kala dhaxeeyay amiirka iyo madaxda sare ee Alshabaab, taasoo keenay inuu shalay iska dhiibo magaalada Baardheere, iyadoo uu la socday askari ilaalo u ahaa.
Aadan Coobe ayaa xilal kala duwan kasoo qabtay ururka Al-Shabab, waxaana jagooyinkaas ka mid ahaa inuu xubin ka ahaa Golaha Shuurada, waana mas’uulkii ugu heer sareeyay ee muddooyinkan ka goosta Alshabaab.
Waxaa magaalada Muqdisho keentay diyaarad kasoo qaaday magaalada Baardheere, iyadoo ay la wareegtay Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka ee NISA.
Hay’adda NISA ayaa qoraal la soo baxay waxaa lagu sheegay in Horjooge Aadan Goobe oo isu soo dhiibay Ciidan uu soo gaaray magaalada Muqdisho, ee caasimaadad Soomaaliya.
Muddooyinkii ugu dambeyeye waxaa sii kordhayay tirade horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka isku soo dhiiba dowladda,kadib markii ay sii kordheen howlgalada lagu baacsanayo,iyadoo qaarna ay fahmeen fikirka qaldan oo ay ka dhaadhiciyeen Al-shabaab.
Previous articleSoomaalida Kenya oo markii ugu horreysay yeelanaya xul kubadda cagta ah
Next articleAadan Coobbe oo golaha shuurada Al-Shabaab ka tirsanaa oo Muqdisho la geeyey